Wicitaanka Dhageystaha, 01 January 2015
Wicitaanka Dhageystaha: Ismaaciil Miicaad
Barnaamijkena wicitaanka dhageystaha waxa uu todobaadkan ku saabsanyahay dhibaatada dhalaanka qurbaha heysata. Waxaa marti ku ah Ismaaciil Aaden Miicaad oo madax u ah urur lagu magacaabo qoys.
Wicitaanka: Heerka Xuquuqda Aadanaha Puntland
Barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Maxamed Yusuf Cali Madaxa Xafiiska Difaaca Xuquuqda Aadanaha ee Puntland kaas oo dhawaan uu ansixiyey golaha wakiillada ee Puntland
Wicitaanka: Hanti-Dhawraha Somalia Nuur Jimcaale
Barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Nuur Jimcaale Faarax oo ah Hanti-dhawaraha Guud ee Somalia oo ka hadlaya Xaaladaha Musuq-maasuqa iyo Wax isdaba marinta xilliyada kala guurka;
Wicitaanka: Prof C.waxid Sh Cismaan Qalinle
Barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Prof. Cabdiwaaxid Sh Cismaan Qalinle oo ka hadlaya Doodaha dhinaca Sharci ee la xidhiidha dilalkii loo geystay laba qof oo madaw ah oo mudaharaado ka dhasheen.
Wicitaanka: Dr. Cusmaan X. Maxamuud (Dufle)
Barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah Dr. Cusmaan Xaaji Maxamuud (Dufle) oo cudurada uurjiifta ku takhasusay, waxaana uu ka jawaabayaa su'aalaha dhageystayaasha Idaacadda VOA
Wicitaanka: Prof. Cali Khaliif Galaydh
Barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxa marti ku ah Madaxweynaha Maamulka Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galaydh oo istuudiyaha VOA nagu soo booqday, kana jawaabaya su'aalaha dhageystayaasha Idaacadda
Wicitaanka: Wasiirka Beeraha ee Somalia
Barnaamijka Wicitaanka ee toddobaadkan waxa marti ku ah Cabdi Axmed Baafo, Wasiirka Beeraha ee Dawladda Federaalka ee Somalia oo ka jawaabaya su'aalaha qaar ka mid ah dhageystayaasha VOA
Wicitaanka: C/qafaar Cabdi Wardheere
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxa uu ku saaban yahay faaqidaad ku saabsan waxa soo cel celiyay khilaafka madaxda dowladda waxaana marti ku ah C/qafaar cabdi wardheere oo ku xeel dheer xiriirka caalamiga ah.
Wicitaanka: Xanuunka Ebolaha iyo Soomaaliya
Barnaamijka waxaa marti ku ah Dr. Cismaan Maxamuud Axmed Xaraare oo ku taqasusay cudurrada carruuta iyo kuwa faafa oo ka jawaabaya su’aalo ku saabsan xanuunka Ebolaha oo cabsi wayn ku haya guud ahaan dunida.